Nzira yekusarudza TIG welding gloves
Vanhu vazhinji havabatanidze izwi rekuti welder neartist, asi kana iri TIG welding, akawanda maarter welders anokuudza iwe kuti ichi chikuru chimiro chehunyanzvi. TIG Welding ndeimwe yenzvimbo dzakaomesesa nzira yekugadzirisa nzira yekugona, uye iyo yemhando yepamusoro yakanaka uye yakagadzikana, inoda h ...
Iyo chaiyo uye inonzwisisika sarudzo uye kushandiswa kwenzvimbo shanu kune yakanyanya tembiricha inodzivirira magurovhosi
Magirosa epamusoro ekupisa tembiricha Sekureva kwezita iri, yakakosha tembiricha yekuchengetedza magurovhosi anoshandiswa munzvimbo dzakapisa dzekupisa. Yakanyanya yepamusoro tembiricha yakavhenganiswa chemakemikari fiber mashanu-chigunwe magurovhosi muchindwe uye indekisi chigunwe kusakara nemishonga yeganda dhizaini ...
10 akajairwa ekudzivirira magurovhosi mune ruzivo uye kwavo kwekudzivirira kuita
Ruoko chikamu chakakosha kwazvo chemuviri wedu, uye basa nehupenyu hazvipatsanurike kubva pairi. Kubva panguva yatakazvarwa, kusvika kumagumo ehupenyu, maoko anga achigara achifamba. Zvinosuruvarisa kuti isu kazhinji tinofuratira kukosha kwayo uye kuchengetedzwa kwemaoko edu, kuti mu m ...
Makemikari ekudzivirira magurovhosi Icho chikamu chakakosha mukugadzirwa kwemakemikari uye chinogona kuchengetedza hutano hwevashandi. Vanhu vazhinji vanoziva makemikari ekudzivirira magurovhosi, asi ivo havazive zvakakwana nezvazvo. Heano marudzi masere emakemikari ekudzivirira magurovhosi zvigadzirwa, uye brie ...